स्वास्थ्यचौकीको ‘इमर्जेन्सी’ गाउँपालिकाको ग्यारेज, डाक्टर भन्छन्- बिरामी जाँच्ने कि बाइक! – Health Post Nepal
स्वास्थ्यचौकीको ‘इमर्जेन्सी’ गाउँपालिकाको ग्यारेज, डाक्टर भन्छन्- बिरामी जाँच्ने कि बाइक!
२०७७ फागुन २५ गते १७:०१
तस्बिर : स्वास्थ्यचौकीमा पार्किङ गरिएको बाइक र बाइक राख्न काठले बेर्दै गरिएको इमर्जेन्सी रुम
स्वास्थ्यचौकीको इमर्जेन्सी रुमलाई मोटरसाइकल ग्यारेज बनाइएको सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ।
हुम्ला अदानचुली गाउँपालिकाको श्रीनगर स्वास्थ्यचौकीको इमर्जेन्सी रुम मोटरसाइकल ग्यारेजमा परिणत भएको छ।
स्वास्थ्यचौकीको ठूलो हलमा गाउँपालिकाका सबै जनप्रतिनिधिहरूले मोटरसाइकल पार्किङ गर्छन्।
गाउँपालिकाले वडाध्यक्षका लागि ल्याएका १० थान मोटरसाइकल पार्किङ गर्दा उपचारमा निकै समस्या खेप्नुपरेको स्वास्थ्यचौकीको गुनासो छ।
बिरामी जाँच्ने कि बाइक
स्वास्थ्यचौकी प्रमुख डा. रामशरण थापा बाइक पार्किङले उपचारमा निकै समस्या भइरहेको बताउँछन्।
उनले स्वास्थ्यचौकीको इमर्जेन्सी रुममा बाइक पार्किङ नगर्न आग्रह गर्दा सुनुवाइ नहुने गरेको गुनासो गरे।
बाइक राख्न स्वास्थ्यचौकी भित्र तयार हुँदै गरेको रुम
‘सात/आठ महिनादेखि इमर्जेन्सी रुममा बाइक पार्किङ भइरहेको छ। हटाउन भन्दा हटाउँदैनन्। हामीले बाइक जाँच्ने कि बिरामी?,’ उनी भन्छन्।
उनले बेड भएकै रुममा बाइक पार्किङ हुने गरेको गुनासो गरे। ‘त्यो हाम्रो इमर्जेन्सी हल हो। बिरामीको चाप भएको अवस्थामा हामीले त्यसैलाई प्रयोग गर्ने गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘अन्य सामान पनि हामीले त्यही स्टोर गर्ने गरेका थियौं। त्यही रुमलाई बाइक राख्ने ठाउँ बनाउँदा गाह्रो भइरहेको छ।’
यसबाट सेवा प्रवाहमा समस्या मात्रै नभएर होहल्लासमेत बढेको उनले बताए। स्वास्थ्यचौकीलाई शान्त राख्नुपर्ने जनप्रतिनिधिहरूको दायित्व भए पनि त्यसो हुन नसकेको उनको गुनासो छ।
उनले बाइक पार्किङले अस्पतालमा फोहोरसमेत हुने गरेको बताए। ‘कोरोना महामारीको समय छ। बाइकमा मानिस दिनभरि कता-कता डुलेका हुन्छन्। त्यो बाइक राति यहाँ भित्र पार्किङ हुँदा यस्ता सरुवा रोगको जोखिम पनि बढेको छ,’ उनी भन्छन्।
ठाउँ अभावमा साँघुरो कोठामा बिरामीको चाप
गाउँपालिकाले सहयोग गरेन
स्वास्थ्यचौकी गाउँपालिकाको ३ नम्बर वडामा छ। वडाध्यक्ष दत्त विष्ट स्वास्थ्यचौकी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पनि हुन्।
विष्ट स्वास्थ्यचौकीको एउटा हलमा बाइक पार्किङ भइरहेको स्वीकार्छन्। ‘गाउँपालिकाका र स्वास्थ्यकर्मीका बाइक पार्किङ भइरहेको साँचो हो। स्वास्थ्यचौकीको प्रयोगमा नआएको कोठामा हामीले बाइक पार्किङ गरेका हौं,’ उनले भने, ‘अब काठले बेरेर सोही कोठामा अलग्गै बाइक राख्ने ठाउँ बनाइरहेका छौं।’
विष्टले गाउँपालिकामा लिखित रूपमै स्वास्थ्यचौकीमा बाइक नराख्न आग्रह गरेको बताए। तर, गाउँपालिकाले नसुनेको उनको गुनासो छ। आफू एकजनाले चाहेरमात्रै केही गर्न नसक्ने उनी बताउँछन्।
‘ स्वास्थ्यचौकीमा मोटरसाइकल पार्किङ गर्नु राम्रो होइन। म त वडाध्यक्ष पनि भए स्वास्थ्यचौकीको अध्यक्ष पनि। तर पनि दोहोरो पेलानमा छु,’ उनी गुनासो गर्छन्।
उनी बाइक पार्किङ गरिने स्थान नजिकै सुत्केरी कक्ष भएकाले अप्ठ्यारो भइरहने बताउँछन्।
सेवा लिन आएकी महिला
गाउँपालिका अध्यक्षको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति
तर, गाउँपालिका अध्यक्ष दल फडेरा स्वास्थ्यचौकी खुला भएकाले पार्किङ गर्न सहज भएको गैरजिम्मेवार प्रतिक्रिया दिन्छन्।
‘स्वास्थ्यचौकीमा कम्पाउन्ड छैन। जसको पनि कार्यक्रम त्यहीँ हुन्छ। त्यसैले इमर्जेन्सी रुममा नभई ट्वाइलेट छेउको प्राङ्गणमा मोटरसाइकल पार्किङ गरिएको हो,’ उनले भने।
उनी गाउँपालिकामाथि लागेको आरोप स्वीकार्दैनन्।
स्वास्थ्यचौकी व्यवस्थित बनाउने दायित्व गाउँपालिका र जनप्रतिनिधिको भए पनि पार्किङ गर्न सहज भएकाले प्रयोग गरिरहेको ठाडो अभिव्यक्ति दिन्छन् अध्यक्ष फडेरा।
उनले बस्तीबीचको खुला ठाउँ स्वास्थ्यचौकी भएकाले त्यहीँ पार्किङका लागि सहज भएको बताए। ‘पहाडमा तराई जस्तो कहाँ हुन्छ। खुला ठाउँ पाउनै गाह्रो हुन्छ। अनि स्वास्थ्यचौकीमा पार्किङ नगरे कहाँ गर्नु,’ उनले भने।
अन्यत्र पार्किङ गर्दा बच्चाले चलाउने र मोटरसाइकल असुरक्षित हुने भएकाले स्वास्थ्यचौकी रोजिएको उनले बताए।
‘सबै वडामा बजेट विभिन्न क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्छ। जसले गर्दा कनिका छरेजस्तो हुन्छ। र, हामीले स्वास्थ्यचौकी तथा पार्किङ व्यवस्थापनका लागि प्रयाप्त बजेट छुट्याउन सकेका छैनौं,’ उनले भने।
उनले गाउँपालिकामा १५ शय्याको अस्पताल बने सबै समस्या हल हुने बताए।
बाइक पार्किङका लागि तयार हुँदै गरेको कक्ष